Fish-indlovu izimpilo eCongo River kanye nemifula laseCameroon. Lolu hlobo abokuqala eYurophu ngo-1950, sase-Soviet Union - ngo-1962. Ubude omdala ifinyelela 23 amasentimitha. Umzimba sisalokhu ngokwanele, kodwa izinhlangothi isicaba. Amaphiko pectoral ziphezulu amaphiko fin sigudluke kude emuva. Fish Indlovu ayinakho amaphiko okhalo, ngokuphathelene umbala, umbala onsundu yakhe emnyama. Phakathi amaphiko futhi amaphiko anal black indawo enkulu ngokwanele.
Igama izinhlanzi kwakubangelwa esisogwini engxenyeni engezansi emhlathini we lezi, futhi leyo mali ilingana ngamasentimitha amabili. Lezi libukeka stem oyindilinga eside. Okubizwa ngokuthi isiqu idinga izinhlanzi ukuthola ukudla. Isikhathi sokuphila zilwane ezimweni zemvelo yisilinganiso sesifundo iminyaka eyisishiyagalombili. Amanzi "izindlovu" nzima ukuhlukanisa ngobulili, umehluko nje wukuthi abesifazane kukhona kunangendlela kwabesilisa. Fish babe isici okumangalisayo, okungukuthi ngenxa Amasimu kagesi ukuthola indlela yabo ebumnyameni. Futhi, bayakwazi ukuhlukanisa phakathi kwabafileyo eziphilayo. River indlovu ithanda ukubhukuda eduze phansi. Fish ukubukeka kwabo ufana minesweeper.
Okuqukethwe kanye kabusha lezi zinhlanzi, kuhlanganise nezinhlobo eziningi ezinkulu, ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke ngo aquarium, okulingana ezingaphezu kuka-120 amalitha. Aquarium kufanele kube ingilazi uvalwe waqiniswa, ngaphandle kwalokho izinhlanzi ngeke sifinyelele kuyo. "Izindlovu" akuyona kakhulu afune izinto ngenkani kwabanye ukubunjwa amakhemikhali amanzi. Ukuze izinhlanzi zokuthi bazizwa benethezekile kuleli aquarium kufanele yokukhosela ahlelwe ngendlela emihumeni itshe, amahlozi obukhulu futhi imbali amabhodwe. Njengoba for umhlabathi, kufanele kube okuxekethile esithambile. Lokhu kuyadingeka ukuze sizakhele imizuzu embalwa ngemva resuspension. Njengoba primer ingasetshenziswa le wageza Peat udoti. Iningi izinhlanzi ukuphila-indlovu iragela phambili, isikhathi esifushane, kungaba esimweni ezolile. Lolu hlobo njalo nokujaha izinhlanzi labanjengaye, futhi ngezinye izikhathi waphishekela ngaphandle ngenjongo ethile inhlanzi enkulu. Izilwane ezincane indlovu kwamanzi akanaki ukunakwa. Bona ingafaniswa ukudlala ingane izindlovu abafuna nje frolic.
Ongoti abaningi babheka nezilwane zasemanzini, inhlanzi-indlovu - izinhlanzi bayiziphukuphuku. Ukuze baziphilise, yena kwafaka ngekhanda odakeni futhi usebenzisa isiqu sawo ngifuna ukudla. Lapho ungqimba obukhulu kodaka itholwa crank, ingalo ezithathekayo amcibe upwardly. Ngemva kwalokho ngokuhoxa crank emlonyeni, okuyinto ahlelwe ngaphansi isiqu. Emvelweni, inhlanzi indlovu selingene shí odakeni isikhathi eside kangaka, kuze iyabonakala fin amaphiko yedwa. On the emuva baye elise umzimba, okuthiwa "elektrolokatorom". Siyabonga kuye, isitha sisondela izobonwa at ibanga elingamamitha ambalwa. abatshuzi abaningi bakhetha ukuthatha izithombe kwi-memory izinhlanzi namawashi ahlekisayo, kuhlanganise inhlanzi futhi Indlovu. It lihlotshiswe edition izithombe eziningi evumelanisiwe.
Ingabe ikhona izikhova ekhaya?
Kungani aphambane Intshebe kitten? Kungani kwenzeka nendlela ukumsiza?
Rosella Zopholi: ukunakekelwa nokugcinwa
Riddler, Edward Nigma kusuka uchungechunge oluthi "Ubutha". Puzzle Edvarda Nigmy
I-Lapo-ukugeza ngezinja: ukubuyekezwa, amamodeli, isimiso sokusebenza. Indlela yokugeza amapayipi enja ngemva kokuhamba
Abantu Little "Ubugebengu Ziyisijeziso," Dostoevsky
Amantombazane amahle amagama esiNgisi
The main mbuzo umzali: kulokho eside ukwazi ubulili wosana?